Dhageyso: Madaxda Madasha Wada-tashiga oo isku mari la’a arrinta Aqalka Sare - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa maalintii 3aad galay Shirka Madasha Wada-tashiga Qaran ee Hoggaamiyeyaasha dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo durbaba shirkan uu hareeyay kala qeybsanaan u dhaxeysa Madaxda iyo qodobada qaar oo la isku mari la’yahay.
Ilo wareedyo ay heleyso Saxaafada ayaa sheegaya in Madaxda ay isku hayaan arrinta Aqalka sare oo noqday mushkilada ugu weyn ee hareysay shirarkii hore, iyadoo tiradii 54 xubnood ee uu ka koobnaa lagu daray afar xubnood oo dheeri ah.
Wasiirka Howlaha Guud iyo Dib u dhiska Maamulka Galmudug Maxamed Maxamuud Guure oo la hadlay Idaacada VOA ayaa sheegay in qodobada la isku haayo uu ka mid yahay Aqalka sare, kadib markii Maamul goboleedyo qaar loo kordhiyay tirada xubnaha Aqalka sare.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Madaxweynaha Galmudug C/kariin Guuleed uu gebi ahaanba diiday xubnaha loogu kordhiyay Puntlanda aqalka sare, isla markaana aanay xaq aheyn in Gobolka Banaadirna aan wax xubin ah la siin.
Sidoo kale Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa soo jeediyay in gebi ahaanba la laalo arrinta Aqalka sare oo ahaa caqabad in muddo ah ka gudbi weysay Madasha, kaasoo noqday Ku-dar iyo Ka-Jar, isla markaana dib loogu dhigo Dowladda soo socota, maadaama aanay Soomaaliya u diyaarsaneyn Aqal hoose.
Hase ahaatee Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas oo maamulkiisa sadka ugu badan ka helayo aqalka sare ayaa gebi ahaanba ka soo hor-jeestay aragtida Shariif Xasan.
Halkan hoose ka dhageyso Wareysi uu Wasiirka Howlaha Guud iyo Dib u Dhiska Galmudug uu siiyay Idaacada VOA.
Arrimo siyaasadeed oo sabab u ahaa joojinta qaadka